Välkomsten Somali - Trollhättans stad
Välkomsten waa waaxda soo dhoweynta ardayda ku cusub iskuulka iswiidhishka ee magaalada Trollhättan. Ujeedada Välkomsten waa in dhamaan ardayda ku cusub dalka ee ka bilaabaya iskuul Trollhättan ay helaan bilow wanaagsan ee iskuul.
Shaqaalaha Välkomsten ayaa dersaya aqoonta asaasiga ee ardayga, wuxuu ku wanaagsan yahay, wuxuu xiiseeyo iyo wuxuu karo. Dersidda ayaa sal u ah
kadib si loo helo warbarasho baahi tirta baahida ardayga.
Välkomsten waxey ka howl-gashaa golayaasha iskuulka Lyrfågelskolan ee bariga eeriyada iskuulka ee Trollhättan. Välkomsten waxey diyaar ula tahay
ardayda u baahan gaari iskuulka geeya.
Kulanka koowaad ee ardayga iyo Välkomsten wuxuu dhacayaa iyadoo la booqanayo macalin bulsho oo soo bandhigayo waxqabadka. Booqashadaa ayaa ardayga iyo mas'uulkiisu ku helayaan warbixinta iyo fursad barasho be'yadda iyo saaxiibada iyo fursad ay su'aalo ku weydiin karaan ku saabsan bilowga iskuulka. Isniinta ku xigta kulanka ayuu ardaygu bilaabayaa Välkomsten.
Välkomsten waxa ka shaqeeya macalinka koowaad, macalin caadi ah, gacan-yare waxbarasho, macalin bulsho iyo kalkaaliso caafimaad. Kalkaalisada caafimaad ee Välkomsten ayaa la kulmeysa ardayga si loo baaro caafimaadkiisa iyadoo la bilaabayo wada hadal caafimaad.
Mudada la joogo Välkomsten ayaa la sameynayaa dersidda ardayga ee aqoontiisa asaasiga, wuxuu ku wanaagsan yahay, wuxuu xiiseeyo iyo wuxuu karo. Dersidaa ayaa laguu sameeyaa afka uu ardaydu sida wanaagsan ugu hadlo. Dersidda ayaa sal u ah kadib si loo helo warbarasho baahi tirta baahida ardayga.
Dersidda waxa barbar socda oo ay Välkomsten bixineysaa waxbarasho asaasi ah ee maadooyinka bulshada.
Sii dhigasho iskuul
Maadaama ay Iswiidhen ka jirto xuriyadda doorashada iskuulka ardaygu
doonayo ayaa sidoo kale Trollhättan waxa arday kastaa xaq u leeyahay in boos ka dalbado iskuulka uu doono.
Ardaygu wuxuu boos la hubo ku leeyahay iskuulka xaafadiisa, taasoo loola jeedo iskuulka ugu dhow guriga. Iskuulada kale waxey ardayga qaataan
haddii ay boos u hayaan.
Warbixin badan ee doorashada iskuulka iyo shuruucda waxad ka aqrisan kartaa bogga internetka ee magaalada Trollhättan : www.trollhattan.se
Bogga internetka ee Trollhättan waxad kaloo ka heleysaa warbixin intaa dheer ee iskuulada Trollhättan, meesha ay ku yaalaan iyo sida ay u shaqeeyaan.
Marka ardaygu bilaabo iskuulka waxa shaqaalaha Välkomsten ay la xiriirayaan iskuulka si loo bilaabo ku wareejinta dersidda iyo baaritaanka caafimaad.
Iskuulka qaabilaya ardayga ayaa qorsheynaya waxbarashada ardayga iyagoo u eegaya dersidda.
Na soo booqo!
Xafiiska soo dhoweynta:
Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16
Tel. 0520-49 79 95, 49 79 96
Gacan yaraha xafiiska soo dhoweynta:
Mariana Yverts, tel. 0520-49 66 54
Ka aqriso wax badan oo ku saabsan Välkomsten
Senast granskad 2019-11-08 av Bente Budau